Author: Zuluktilar Voodoosho
Isaniis Raabamaafi Doorama tahu. Isaaniis warraa akka a. Fakkeenyaaf Boorana keessatti Qaalloota laduu shana jiran kan Maxxaarrii sadaniifi kan Karrayyuu tokkoofi kan Odituu tokko keessaa hunda caala kabajaman Qaalluu Odituuti. Waliigalteen jaalalaan, tokkummaan waliinjiraachuuniis aadaa jiraachaa ture.
Yubooma waggaa 56 Gadaa Tuulamaa kitxaba Gadoomni waggaa 32 — 40 gidduutii waan taheef kana yaadachiisuun barbaachisaadha. Isaaniis, Marsaan duraa Gadaa abbaa yeroo tahu, inni lammaffaa Gadaa ilmaati.
Gaaffi kana deebisuuf, nama Goggeessa Gadaa isaatiin Gadaa keenya jedha. Log In Sign Up.
Kitaabni Gadaa Meelbaa, Hagayya 25, Abbaa Urjii tiin: Ilmaan jaarsaafii ilmaan Kormaa d. Eegaa, kun aadaa amantii sirna Gadaa keessaa isa tokko. Abdaarrii-ayyaana dachii midhaan baasisuuti Qaallonniis sirna ayyaana amantii kanarratti ummata gorsu, jajjebeessu.
Mana Maxxansaa Elenii Bara dhihoo dura akka waliin turan, afaan isaanii walitti seenuun ragaa nitaha. Eegaa, walumaagalatti dalagaan Qaalluu inni tokko namaafi waaqa walqunnamsiisuu akka tahefi jireenyi hafuura Oromootaa maal akka fakkaatu ilaalleerra.
Qaalloonni Oromoo bara sirna Gadaa ummata, uumamaafi biyyaaf waaqa kadhatu; galateeffatu, ummata eeybisu, looniifi madhaaniif rooba kadhatu, warra bira kitaabq waaqa kadhachuuf isaaf muudaniif eebba keennu. Lakkooysi yeroo, aadaan, amantiin, jireenyi hawaasaa, ittisi biyyaafi kkf hundi hidhata Gadaa qabu, fakkeenyaaf sadarkaalee Gadaa, goggeessa Gadaa, abaluu abaluu.
Lammiin seenza Saahoon dura godaanuu waan jalqaban fakkaata. Dhimma jireenya ummata Oromoo fuula hundaan kan ilaalu sirna siyaasa, aada diinagdeefi amantiiti.
Sirni Gadaa sirnaafi seera Oromoonni ittiin walbulchu, kan duulee roorroo ofirraa ittisu, kan dinagdee isaa ittiin tikfatuufi dagaagfatu, akkaata inni itti waliin jiraatuufi kan hawwiin dhala Oromoo cufa ittiin guutu ture.
Harmuf Awaash cehee Affaarootafi Habashootatti duuluu jalqabe. Kanaf, hiriyyummaan karaa hawaassfi polotikaa Oromootaa walitti hidhuudha. Amiir Nuur osoo inni injifannoo argatetti gammadee ayyaaneeffachaa jiruu Oromoonni magaalaa Harar seenanii barbadeessan. Ayyaanoota kana keessaa kan sirna Gadaa keessaa jireenya polotikaa ilmaan Oromoocalaqqisu ayyaana buttaati. Booran keessatti — Gaammee Gurguddaa jedhamu b.
Yeroo tochoonu, ilmi hangafni bakka itti dhalateetti hafa. Kanaaf, Gadaan waggaa saddeet saddeetiin lakkaawama. Marii seeraafi heeraarratti argamanii akka seerriifi heerri Gadaa hin dabneef gorsuufi qajeechuudha. Gibeen qabachuuniis yeroo kana jalqabe. Haberlandfi Mohaammad Hasan Prof. Achirraa Gojjaamiifi Daamoot waraanuu jalqabe.
Dabballooma Kun jecha dabballee jedhamu kan Gadaa Booranaarraa fudhatameedha. Harmuuf Gadaan isaa dhumee Robaleen harka fudhate.
Lolli argamnaan akka dhagayeen qophaawee walgurmeessee duula. Sirna gadaa Hamma kiyyoo kolonii jala hin seeniniti Oromoon sirna ittiin bulan kan mataa isaanii qabau turan. Raaboonni yeroo itti ilmaan kormaa Raaba tahan jedhamu, waggaa jiddutti. Waraanni Adaal Mabraq harka Oromootti baqe, inniniis lbaqatee laga Awaash cehe. Seenaa waggaa 32 5.
Kan Tuulama ammoo, Hambisaa jedhama. Namni dhalatu ayyaana akkamiirra akka kitaabaa kanneen irraa himama. Heeraafii seerri biyyaa akka aadaatti fudhatamee jabaata, kabajamaas, waan jiruufi jireenya ofii ittiin geggeeffatan taheef seeraafi heerri ni kabajamu jechuudha. Gartuuleen kun aadaadhaan hangafaafi quxxusutti beekamu. Sadarkaa Gadaa kun Tuulamafi Ituu keessatti isa shannaffaadha.
Gurmuu kanaan akkaataan jiruufi jireenya dhala Oromoo hundaatu keessatti murtaawa. Bakka warrii Gadaa itti murtii seeraa kennan, dubbii gosaa ilaalanfi marii godhanitti argamanii irraa baratu. Isaaniis bakka bakkati garagar tahu. Gocha gara-jabummaa habashaa kanammoo Oromoon sirna Gadaa jalatti ijaaramuun yeroodhaa gara yerootti gootummaafi jabina isaa agarsiisaa tureera.
Sadarkaan Gadaa maqaa gurmuu waggaa dhaloota ilmaan kormaati jechuudha. Kanaaf lafa fagoo deemee lola gochuu jalqabe.